रातको २ बजे एक महिलाको कोठाभित्र पुरुषले क’ण्डम फालेपछि…. – " सुलभ खबर "
रातको २ बजे एक महिलाको कोठाभित्र पुरुषले क’ण्डम फालेपछि….
काठमाडौं- हाम्रो छिमेकी देश भारतको बैंगलोरमा एउटा अचम्मको घ’टना घ’टेको छ । जहाँ एक महिलाको घरको ढोका रातको २ बजे ढक्ढक्याइयो र घरभित्र क ण्डमका प्याकेट फ्याँकियो । ती व्यक्तिले महिलाको घरभित्र थुप्रै क ण्डमका प्याकेट फालेका थिए ।
आज तकको समाचार अनुसार यस घ’टनाका बारेमा पुत्तैनहाली पुलिस स्टेशन क्षेत्रमा बस्ने एक महिलाले उ’जुरी दर्ता गराएकी छिन् ।झ्यालबाट भित्र क ण्डम फालेर गए । महिलाले तत्कालै १०० नम्बर डायल गरेर पुलिसलाई जानकारी दिइन् तर पुलिस पुग्दासम्म ती व्यक्ति भागिसके
महिलाले उ’जुरीमा लेखेअनुसार ती व्यक्तिले रातको २ बजे उनको ढोका जोडले ढक्ढक्याएका थिए । ढोका नखुलेपछि ती व्यक्तिले कसैगरी एउटा झ्याल खोले त्यसपछि बत्ती बालिदिए । उनले कैयौं पटक बत्ती बाल्ने र निभाउने गरे ।
उनको यस्तो ह’र्कतले महिला त्रसि’त भइन् । महिलाले ढोका नखोलेपछि ती व्यक्तिले झ्यालबाट भित्र क ण्डम फालेर गए । महिलाले तत्कालै १०० नम्बर डायल गरेर पुलिसलाई जानकारी दिइन् तर पुलिस पुग्दासम्म ती व्यक्ति भागिसकेका थिए ।
महिलाले हेर्दा भुइँमा क ण्डमका थुप्रै प्याकेट थिए । पुलिसले आरो*पीको खोजी गरिरहेको छ । सिसिटिभी फुटेजको जाँच गरेर पुलिस आरो’पीको खोजी गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।सांकेतिक तस्बिर- गुगल
यो पनि बाजागाजा बजिरहेका थिए तर बेहुली लिन बेहुला नआएपछि….